SIDA LOO ABUURO FURAZOLIDONE FOR DIGAAGGA: WAA MAXAY FAA'IIDO LEH, WAXA LA SAMEEYO XADDI BADAN, IYO SIDOO KALE SIDA LOO QASO CUNTADA IYO BIYAHA? - BEERAHA DIGAAGA
Sida loo siiyo Furazolidone digaagga iyo sida loo abuuro?
Qodobbada koritaanka ayaa ah hawl adag oo dhib badan sababtoo ah aaladda jilicsan iyo difaac aan shakhsiyadeed aheyn. Waxaa jira khatar aad u sareysa oo ah digaagga soo saaro cudurrada fayrusyada kala duwan iyo cudurada faafa. Sidee loo badbaadiyaa oo u ilaaliyaa xoolaha? Waa maxay cudurkani wuxuu muujinayaa qaadashada Furazolidone? Sidee loogu beeraa biyaha oo siiyaa da'yarta?
Saameynta daaweynta iyo qiimaha
Daroogada, ficilka ficilka ee loogu talagalay in la tirtiro microbes (waxyeelo antimicrobial). Daawada ayaa iska leh walxaha deriska ah ee nitrofuran. Furazolidone ayaa si firfircoon u dagaallamaya jirooyinka:
walxaha keena daacuunka;
Waa maxay isticmaalka Furazolidone? Marka la eego ficilka walxaha firfircoon, saameynta sunta ee unugyada microbial burburay ayaa la dhimay. Daawada antibiyootikadu waxay sidoo kale kicisaa oo hagaajisaa nidaamka difaaca jirka.
Daroogadu waxay leedahay saameyn bactericidal iyo bacteriostatic ah (iyadoo ku xiran qiyaasta). Fasaxa sii-deynta - kiniinada baakadka kuxiga. Qiimaha bacda leh 10 xabbo waa 70 RUB, oo leh 20 kiniin ah - 150 rubuc.
Daawada waxaa lagu muujiyay tiro cuduro faafa ah si loo tirtiro calaamadaha loogana hortago dhimashada xoolaha yar yar.. Daawada ayaa lagama maarmaan u ah colibacteriosis, salmonellosis, coccidosis iyo cuduro la mid ah oo ka yimid asalka bakteeriyada. Isticmaalida Furazolidone oo loogu talagalay dhamaystirka antibiyootigyada kale, faafitaanka wakiilka infekshinka ayaa joojiya dhaqsaha.
Qalabku wuxuu leeyahay saameyn guud oo xoojinaysa jiritaanka shakhsiyaadka. Sababtoo ah maaddooyinka firfircoon ee ka kooban halbeegga waxay kordhinayaan heerarka Hemoglobin, Protein iyo creatinine ee dhiigga.
Digaagga Furazolidone waxaa loo qoraa ka hortagga cuduro badan. Liiskooda faahfaahsan waxaa ka mid ah hargabka, furuqa, cudurada lafdhabarta, cagaarshowga viral, pseudo-pectum (cudurada Newcastle).
Intee in la siinayaa?
Wixii daawo ah ee daroogada digaagga waxaa jira nidaamyo dhowr ah (doorashadu waxay ku xiran tahay ujeedada daaweynta gaarka ah iyo da'da yar). Tiknoolajiyada guud ee nidaam kasta - isku daridda daroogada oo quudin ama biyo.
Digaaga maalin walba loo xilsaaray 0.5 g oo ah walax ilaa 1 litir oo biyo ah (ama 0.4 g halkii 1 kg oo cunto ah). Koorsada soo dhoweynta - ugu badnaan 2 maalmood.
Dhalliyeyaasha da'doodu ka yar tahay 1 usbuuc qiyaasta dawada ee ujeeddooyinka loo yaqaan prophylactic - 3 mg halkii 1000 g oo miisaanka nool.
Kalluunka 2-usbuuc ah wuxuu muujiyey 1 kiniin halkii 100 ml oo biyo ah (1 koob). Kiniinka ka hor waxaa lagu kala diri karaa vodka (2-4 dhibcood). Siinta xoolaha yar yar illaa 5 maalmood.
Haddii uu dhaco salmonellosis, furazolidone ayaa loo maamulaa iyadoo ku xiran culeyska digaagga - 4 mg halkii 1 kg. Koorsada daaweynta waa 4-6 maalmood.
Kiniiniyada antibiotica waa in la siiyaa koorso ilaa 5 cisho. Markaas waxaad u baahan tahay inaad fasax qaadato ilaa 1 asbuuc. Marka xigta, 2-4 maalmood, waxaad u baahan tahay inaad bixiso fitamiino iyo maalintii 5-aad ee dib u bilawda qaadashada daawada antibiyootigga ka hortagga cudurrada (nidaamku waa ku talin karaa muddada uu bislaado iyo sheybaarka).
Haddii cudurka cudurka faafa iyo cudurrada fayraska keena, Furazolidone ama isbarbardhiciyaasheeda ayaa loo qoondeeyay qorshaha. Buuxi koorsada soo-dhoweynta waa inay noqoto 2 toddobaad ka hor inta aan la gowraco.
Xaddiga xad-dhaafka ah
Haddii ay dhacdo xaddi badan oo furazolidone ah shimbir, waxaa laga yaabaa inay bilaabato suntan jirka.
Astaamaha calaamadaha ee sumowga:
tabardarro iyo arxan-darro (istaandarka digaaga keligii);
matag iyo shuban (baaluqyo ku yaal gobolka ausku waxay leeyihiin cayayaanka khatarta);
neefsashada degdeg ah;
Maxaa la sameeyaa haddii uu dhaco sumowga?
Tallaabada kowaad iyo qasab ayaa ah hirgelinta qadar ballaadhan oo loo yaqaan 'sorbent' (oo la siiyo 2 saacadoodba).
Sidoo kale, dhalinyaradu waxay u baahan yahiin inay seexdaan caloosha jilicsan, immunostimulants, wakiilada wadnaha. Daaweynta hore ee 90% waxay ka saartaa calaamadaha suntan.
Xaaladaha aad u sarreeya ee gacanta, waa lagama maarmaan in la qaato calcium gluconate oo loogu talagalay duritaanka, daroogooyinka steroids, Corvalol. Furazolidone waa antibiotic oo leh antimicrobial iyo antibacterial properties.
Xayawaanka yaryar waa in la siiyaa daroogada toddobaadyada ugu horreeya ee nolosha si looga hortago cudurada halista ah ee asalkooda. Qiyaasta iyo qiyaasta waxay kuxirantahay da'da iyo culeyska shakhsiyaadka..
On our site waxaa jira macluumaad xiiso leh oo ku saabsan sida loo quudiyo digaagga muddo bil ah iyo ka dib, oo ku saabsan quudinta broilers iyo lakabyada, iyo sidoo kale ku saabsan bacriminta metronidazole iyo penicillin.